2017 Webhu Dhizaini uye YeMushandisi Chiitiko Maitiro | Martech Zone
2017 Webhu Dhizaini uye YeMushandisi Chiitiko Maitiro
Muvhuro, Ndira 23, 2017 Muvhuro, Ndira 23, 2017 Douglas Karr
Isu takanyatsonakidzwa nemamiriro edu apfuura paMartech asi takaziva kuti yaitaridzika kunge yachembera. Kunyangwe yaive ichishanda, haina kungowana vashanyi vatsva sezvaimboita. Ini ndinotenda vanhu vakasvika panzvimbo iyi, vakafunga kuti yaive kumashure kumashure pane dhizaini yavo - uye vakaita fungidziro yekuti zvirimo zvingave futi. Zvichitaurwa zviri nyore, isu taive ne mwana akashata. Taida mwana iyeye, takashanda nesimba pamwana iyeye, taidada nemwana wedu… asi zvaive zvakashata.
Kufambisa saiti iyi, takaita ongororo zhinji dzekushambadzira masaiti aive achitora chikamu chemusika. Isu takacherekedza kufamba kwavo, marongero avo, mafonti avo, marongero avo enhare anoteerera, kushandisa kwavo mamwe masvikiro, kushambadzira kwavo, nezvimwe. Isu takatsvaga saiti iyo yataigona kuisa akawanda maficha uye mashandiro atakambosundira kubva kumapulagi uye tikashanda kuona kuti iwo aive epamoyo theme mabasa. Izvi zvaizobatsira iyo saiti kumhanyisa kugadzirisa uye nekudzora mukana wekupokana kana kumwe kusagadzikana kwekushandisa.
Zvakashanda. Yedu saiti traffic yakwira 30.91% yenguva imwecheteyo gore rapfuura. Usatarisira pasi kukosha kwechiitiko chevashandisi vako uye zvazvinoita pakutsvaga nekuchengetwa.
Kana iri nguva yekupa yako saiti kusimudzira chiso zvakare… pane toni yemikana kunze uko yekukubatsira iwe kugadzirisa ruzivo rwevashandisi (UX) kune vashanyi vako. Kupera Kwakadzika isa pamwe iyi infographic nemamwe mazano pane kwaunogona kutsvaga kumwe kurudziro yekugadzira.
Gore rega rega rinotiunzira batch nyowani yemaitiro atinogona kutarisira kuona achibuda pawebhusaiti. Asi kuve agency isingareve kutenderera-ngoro, isu takatsvaga gumi dzinovimbisa dhizaini webhu uye mushandisi-chiitiko mafambiro e2017 ayo anogona kushandiswa kugadzirisa chaizvo shanduko pane chero webhusaiti. Ndozvakawanda vatengi, vatengi kana zvinotungamira muhomwe yako, inova nzira yakanaka yekurira muNew Year.
Webhu Dhizaini uye UX / UI Maitiro
Zera-Rinopindura Dhizaini - akasiyana mazera mapoka achaita zvakasiyana nezvakasiyana zvemukati, dhizaini uye aesthetic sarudzo.
Skeleton Screens - kurodha peji mumatanho, kubva pane yakapusa kusvika kune yakaoma kuti vatengi vagone kutarisira izvo zvirimo zviri kuuya zvinotevera.
Kubatanidzwa Bho - ita nevashandisi vekunatsiridza ruzivo rwevatengi uye kutungamira chizvarwa pasina kuburikidza neAI chat bots.
Ngoro yekutengera Kushambadzira -Kupa zvinokwidziridzwa, zvakapetwa zvinopihwa, uye kuyambuka-kutengesa panguva yekutarisa kuburitsa imwe mari
Mhuka dzeKudaidzira-Ku-Chiito Mabhatani - shandisa zvirinyore uye zvisinganzwisisike mifananidzo yekudaidza mabhatani ako ekuwedzera kudzvanya-kuburikidza.
Cinemagraph Gamba Mifananidzo - chikamu chemufananidzo, chikamu vhidhiyo, mabhaisikopo anoshandiswa pasi asi anomutsa kufarira kukuru.
Anotsanangura Persuader Vhidhiyo - shandisa vanhu chaivo vakaita sekupupura kwevatengi uye dhizaini yezvigadzirwa kukurira zvinopesana uye kuvhara kutengeswa.
Kukosha-Kwakavakirwa Kubuda Kunofukidzwa - shandisa zvinopihwa zvekubuda kwete zvekugumburisa kana mumwe munhu achizosiya yako saiti.
Rufu rweImba reImba - hunhu uye vateereri-akasarudzika akasimba mapeji ekumhara anovavarira zvirinani huwandu hwevanhu uye maitiro.
Kupuruzira Trumps Navigation - zvinonyanya kukosha pane kuchengeta zvirimo kumusoro kwemapeji akawanda kutaurira nyaya inomanikidza pane peji rimwe chete.
Tags: 2016dhizaini maitirouiui dhizainiuser experienceuser interfaceuxux dhizaini
Vanopfuura zana Vanyori Vanogovana Ruzivo rwavo muBhuku Rekunaka Bhizinesi